Zava-mahaliana ho fantatra momba ny Shaman King - Fialam-Boly
Zava-mahaliana ho fantatra momba ny Shaman King
Inona no ao anatin'ilay andiany?
Zavatra mahaliana ho fantatra momba ity andiany Manga ity
Ny antony ao ambadiky ny fampitsaharana ny andiany
Faly aho milaza aminareo momba ny andiany Manga Japoney hafa fantatra amin'ny anarana hoe Shaman King . Manaraka an'i Yoh Asakura izy io rehefa miezaka mampivelatra ny talentany shaman mba hahazoana fandresena amin'ny ady amin'ny Shaman ary ho lasa Mpanjaka Shaman.
Ity dia andiany Manga hafa toa an'i Slam Dunk – izay mifototra amin’ny basikety Dragon Ball Super Season - Izay mitantara ny zavatra niainan'i Goku taorian'ny nitsambikina folo taona taorian'ny faharesen'i Majin Buu.
Teo anelanelan'ny Jona 1998 sy Aogositra 2004, navoaka tao amin'ny Shueisha's Weekly Shonen Jump ny manga Shaman King. Amin'ny 32 tankobon boky, natambatra sy navoaka ireo toko isan-karazany. Nividy ny zon'ny andiany i Kodansha tamin'ny taona 2017 ary namerina izany tamin'ny taona 2018 tamin'ny boky e-boky 35, miaraka amin'ny fanontana printy manaraka ny taona 2020.
Shaman King dia momba an'i Yoh Asakura, shaman iray izay mampifandray ny tontolo velona sy ny maty. Te ho Mpanjaka Shaman i Yoh, izay afaka mifandray amin'ny Fanahy Lehibe ary manova izao rehetra izao amin'ny fomba rehetra nofidiny, ary raha te hanao izany izy dia tsy maintsy mandresy ny Shaman Fight, ady eo amin'ny shamans mpifaninana izay mitranga indray mandeha. isaky ny 500 taona.
Tonga fotoana fohy taorian'izay ny fofombadin'i Yoh, Anna Kyoyama ary nanoro fandaharam-piofanana henjana hanomanana azy amin'ny fifaninanana. Manomboka eto ny dian'i Yoh, miaraka amin'i Ryu, Tao Ren, Horohoro, Faust VIII, Lyserg Diethel, ary Joco McDonnell (fantatra amin'ny anarana hoe Chocolove McDonnell).
Nandritra ny Ady Shaman, i Yoh dia nihazakazaka namakivaky ny rahalahiny kambana mivady Hao Asakura, shaman mahery izay te hanaisotra ny tontolon'ny olombelona ary hanorina fiaraha-monina ho an'ny shamans. Ny ekipa sisa taorian'ny fiafaran'ny ady shaman dia i Yoh sy ny namany, ny X-Laws ary ny ekipan'i Hao.
Ny ekipa hafa dia nanapa-kevitra ny handao ny fifaninanana, ary i Hao no satroboninahitra Shaman King. I Yoh sy ny namany dia mikasa ny hanafika an'i Hao rehefa miaraka amin'ny Fanahy Lehibe, izay ao anatin'ny tsy fahatsiarovan-tena, rehefa entin'izy ireo. Mba handresena an'i Hao, Yoh sy ny namany dia tsy maintsy miady amin'ny mpikambana ao amin'ny The Patch Tribe izay tsy maintsy manompo ny mpanjaka Shaman vaovao.
Takei, izay niasa ho mpanampyNobuhiro Watsuki's Rurouni Kenshin,niresaka momba ilay andian-dahatsoratra niaraka tamin'ireo mpanampy hafa, anisan'izanyEiichiro Oda, ilay mpamorona ny One Piece.
Nobuhiro Watsuki dia niasa ho mpanampy manga amin'ny maha aWatsuki mpiara-miasa,nifantoka fotsiny tamin'ny tetikasany tamin'ny andro tsy iasanany. Voataonan’nyhip-hopSYzavakanto an-dalambe an'ny kolontsaina rap, araka ny hita amin'ny sanganasany manga.
Nobuhiro Watsukinampiasa ranomainty calligraphy sy penina mba hamoronana ny sariny. Nampiasa marika loko marika Copic izy rehefa nanao sary.
nytoko 275 voalohanydia natambatra ho 31 tankobon boky, ka ny voalohany tamin’ny 3 Desambra 1998, ary ny farany tamin’ny 4 Oktobra 2004.
Nahemotra ny Boky faha-32, izay tokony navoaka tamin’ny 3 Desambra 2004, ary nilaza i Shueisha fa tsy hamoaka afa-tsy ny boky faha-32 izy ireo raha mahazo porofo fitakiana avy amin’ny olona 50 000. Tamin'ny 5 Janoary 2005, navoaka ny toko folo farany tankobon endrika.
Tononkalo Funbari, a spin-off nyShaman King, Naharitra toko dimy ary nasongadina tao amin'ny boky 32. Hana Asakura, zanak'i Yoh sy Anna, ary Ryu ny iraka hitady ny Five Element Warriors ho an'ny fihaonana indray alohan'ny fisokafan'ny Funbari Hot Springs Inn dia natao fito taona taorian'ny fahavitan'ny andiany manga.
Ny andiany manga tany am-boalohany, izay misy boky 32, dia namidy kopia maherin'ny 26 tapitrisa tany Japon tamin'ny Novambra 2011. Tamin'ny martsa 2020, efa namidy maherin'ny 35 tapitrisa ilay manga. Nahatratra 38 tapitrisa mahery ny manga tamin'ny martsa 2021.
Nanomboka tamin'ny Martsa 2003 ka hatramin'ny Aogositra 2007, ny Viz Media any Amerika Avaratra dia nahazo ny fahazoan-dàlana amin'ny teny anglisy ho an'ny manga ary namoaka toko ny Shaman King tao amin'ny gazetiboky Shonen Jump.
Nolazain'i Takei fa tsy noho ny fihenan'ny tombom-bolan'ny andiany no nahatonga ny fanafoanana fa noho ny harerahana niainany noho ny tsy fahafahany nanome fahafaham-po ny fanirian'ny mpankafy azy intsony. Ny Shaman King, araka ny filazan'ny mpanoratra, dia nohamarinin'ny fanirian'ny mpihaino azy tamin'ny fampidirana ireo singa shonen mahazatra sy ny fahaverezan'ny maha-izy azy.
Nambarany tamin'ny 2007 fa nikasa ny hamaranana ny andiany amin'ny famaranana noeritreretiny izy, izay havoaka amin'ny gazetiboky Shueisha hafa amin'ny faran'ny taona na amin'ny fiandohan'ny taona 2008, amin'ny gazetiboky Shueisha hafa.
Dia faly ve ianareo rehetra mijery ny andiany? Raha eny, dia eo amin'ny pejy iray ihany isika. Tsy izao no farany; Azonao atao ny mamaky momba ny andian-tantara sy sarimihetsika japoney bebe kokoa amin'ny tranokalanay izay handresy ny fonao.
Complex Sky - Tranoben'ny tanàna futuristika miaraka amin'ny fihodinana tokana!
Ilay vehivavy ao an-trano ampitan'ny arabe avy amin'ilay tovovavy eo am-baravarankely vanim-potoana faha-2: Daty famoahana: Inona no fantatsika hatreto momba ity andiany ity!
mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra taloha maimaim-poana
4k famerenana boaty android android
mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra an-tserasera hd
mijery 8 segondra an-tserasera megavideo maimaim-poana
seho iray amin'ny iray amin'ny Internet